Indlela ukushintsha phakathi Open Apps ku-iOS 7
Lesi sihloko iwukubonisa indlela ukushintsha phakathi vula izinhlelo zokusebenza ku-iOS 7. Lapho egijima isicelo, ukwazi ukunciphisa limane ngokuchofoza inkinobho indlu. Ukubuyela kuyinto chofoza eyodwa nje kuphela yendawo yemisebenzi efana kanjani wena ukuyenza emafasiteleni Ekhaya.
Step 1: Chofoza kabili inkinobho yakho iPad Ikhaya ukuze ubonise vula izinhlelo zokusebenza. Ungasebenzisa futhi iminwe ezine noma ezinhlanu ukuze swayipha ukukhombisa vula izinhlelo zokusebenza, bese swayipha phansi ukuze ufihle kubo.
Step 2: Swayipha kwesokunxele noma kwesokudla, uthepha uphawu noma isithonjana ukuze kweso ukushintshela uhlelo lokusebenza evulekile.
Posted on Okthoba 27, 2013 May 9, 2015 Umbhali WillIzigaba Amathiphu & NamaqhingaAmathegi iOS, Ukushintsha phakathi kwesicelo
Langaphambilini post Previous: Indlela ukungenisa izithombe siqu namavidiyo kusuka iPhone, iPad, noma iPod Touch ku-Mac besebenzisa iPhoto
Next post Next: Indlela ukuguqula DVD Movies ku-Nexus 5